Ny faritra ao AziaHanova
Ireo faritra ao Azia araka ny famaritan' ny Firenena MikambanaHanova
I Azia Afovoany dia faritra afovoan'ny kôntinenta aziatika izay mivelatra manodidina ny Ranomasina Kaspiana, ny Ranomasin' i Araly ary ny farihy Balkhach. Ny firenena ao Azia Afovoany dia i Kazakstàna, i Ozbekistàna, i Tajikistàna, i Torkmenistàna ary i Kirgizistàna.
I Azia Andrefana na ny Afovoany Atsinanana dia ny faritra atsimo andrefan'i Azia. Ireo firenena ao Azia Andrefana dia i Arabia Saodita, i Iràka, i Iemena, i Ômàna, i Iràna, i Siria, i Jôrdania, i Israely, i Palestina ary i Torkia.
I Azia Atsinanana dia faritra atsinanana ao amin'ny kôntinentan'i Azia. Ireto avy ireo firenena hita ao Azia Atsinanana: Sina, Kôrea Avaratra, Kôrea Atsimo, Japàna ary i Taioàna. Manampy azy ireo i Môngôlia (izay indraindray tao isan'i Azia Afovoany) sy i Vietnamy sy i Singaporo (noho ny antony ara-kolontsaina, atambatra matetika amin' i Azia Atsimo-Atsinanana), ny faritra rosiana Farany Atsinanana koa dia azo ampidirina ao. Matetika dia akambana amin' ny faritra Farany Atsinanana izy.
Ny Azia Atsimo-Atsinanana dia ny faritr' i Azia any atsinanan'i India ary any atsimon'i Sina. Ireo firenena ao Azia Atsimo-Atsinanana dia i Mianmara, i Tailandy, i Malezia, i Indônezia, i Filipina, i Vietnamy, i Laôsy, i Broney ary i Kambôdia.
Ireo faritra hafa ao AziaHanova
Faritra ara-tantara ao AziaHanova
Tany any Azia :
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Azia&oldid=1037015"
Dernière modification le 1 Septambra 2021, à 17:13
Voaova farany tamin'ny 1 Septambra 2021 amin'ny 17:13 ity pejy ity.